Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်း (ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစာမကျြနှာ) (NCS အလုပ်အကိုင်များလည်းပါဝင်သည်) မှာအသင်းကို Join
သငျသညျလူငယ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူတို့ကိုမယုံနိုင်စရာအောင်မြင်ရန်မြင်နေကိုချစ်သလား? ထိုအခါငါတို့အဖွဲ့က join ဖို့လျှောက်ထား!
, အာမခံချက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားမှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီ (အရေအတွက်: 1157932) နှင့်မှတ်ပုံတင်သင်ယူမှု provider က (UKPRN: 08576383): element Society ကမှတ်ပုံတင်ထားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကို (10047367 နံပါတ်) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒြပ်စင် Society ကကလေးများနှင့်လူငယ်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။
သင်တို့သည်ဤအခန်းကဏ္ဍတွင်မဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ NCS အဖွဲ့သို့အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့် e-mail ကိုတစ်လျှောက်လွှာပုံစံကို download လုပ်ပါကျေးဇူးပြုပြီး - ncs@elementsociety.co.uk